Ama-ATM we-Biometric wonke asethelwe kohlamvu lwemali athuthuke ekuqinisekisweni nasekusebenzeni kahle
Ngo-Ephreli 2014, i-Federal Banking Institutions Council Council (FFFIC), ukunqwabelana kwesesha
Ngo-Ephreli 2014, i-Federal Banking Institutions Council Council (FFFIC), ukunqwabelana kwesesheya kwabalawuli basebhange, kuxwayise izwe'Amabhange we-SpipCom omusha we-othomathikhi we-Teller Apparatus (ATM) Ukuphanga uhlelo lokusebenza luhlelo lokuhlaselwa kokuhlaselwa kwe-cyber kanye nemininingwane ye-saza.
Kuthiwa 'imisebenzi engenamkhawulo' Ngenkonzo eyimfihlo yase-US, abahlaseli bakwazi ukwengeza imali ngaphezulu kwezimali ezilinganiselayo kanye nemikhawulo yokulahlwa, lokhu kubukeka okusha kokuphanga kubeka amabhange engozini yemali enobungozi. Esimweni esinikezwe yi-FFIC, kusengaphambili okutholile ingozi ye- $ 40 actor kwenziwa isicelo ama-akhawunti a-ajenda angu-12.
Ama-ATM, abuyele emuva kwawo embonini yasebhange ngeminyaka yo-1960, amukele umsebenzi owenziwe kalula kubathengi njengoba enamandla njengamabhange. Amakhadi nezinombolo ze-PIN avume zamukelwa ukuthi zikhonsele ikhono eliphephile esikhathini esedlule, kepha njengoba ukwenziwa kwezengezwa yinkimbinkimbi, amabhange ayatholakala ukuze ahambisane nobuchwepheshe be-Avant-Garde - Biomtestrics.
PHAMBI Amahhotela angakhuphula kanjani ukuphepha
Umbono we-LS uzizwe uyaziqhenya ngokuthi 'kwenziwa eChina' OLANDELAYO